March 23, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments Cancer, क्यान्सर
क्यान्सर एक जटिल रोग हो तर पनि करिव ४० प्रतिशत क्यान्सर रोकथाम गर्न सकिन्छ । ३३ प्रतिशत क्यान्सर समयमा पत्ता लगाएर उपचार गरी निको पार्न सकिन्छ र बाँकी करीब २७ प्रतिशतलाई पनि उचित उपचारबाट आयु लम्याउन सकिन्छ । यसका लक्षण देखिए भने पनि आत्तिइ हाल्नु हुँदैन तर नियमित रुपमा जाँच र चिकित्सकको परामर्स भने लिनु पर्छ । यो रोगको मुख्य कारक तत्वको खोजी गर्दा बदलिदो जीवनशैली, खानपान, बाताबरणीय प्रभाव प्रमुख रुपमा आउछ । विश्वभरमा नै पाच प्रमुख क्यान्सरका कारण हुने पुरुषहरुको मृत्यु मध्येमा फोक्सो, पेट, कलेजो, कोलोरेक्टल र अन्ननलीको क्यान्सर रहेका छन् । विश्वभरी नै क्यान्सरका कारण हुने महिला मृत्यु मध्येमा स्तन, फोक्सो, पेट, कोलोरेक्टल र पाठेघरको क्यान्सर रहेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हाल विश्वमा १ करोड ४१ लाख जनामा नयाँ क्यान्सर देखिएको छ । डव्लुएचओले नै क्यान्सरकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या ८२ लाख पुगिसकेको जनाएको छ । र यदि अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै गएमा सन् २०२५ सम्म १ करोड ९३ लाख जनामा क्यान्सर देखिने अनुमान गरेको छ । क्यान्सरका कारण हुने समग्र मृत्युमध्ये ७० प्रतिशत अल्प विकसित र कम विकसित देशमा हुने गरेको छ । सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्न सके क्यान्सरबाट हुने मृत्यु २२ प्रतिशत रोक्न सकिन्छ । यो क्यान्सर रोकथाम गर्न सकिने एक मात्र ठुलो उपाय पनि हो । नेपालका क्यान्सर रोगीमध्ये करिब १० प्रतिशतलाई मात्र रोग लागेको समयमै थाहा हुन्छ । नेपालमा जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशतमा क्यान्सर रोग लागेको अनुमान छ । तर यसमध्ये करिब ५००० बिरामी मात्र अस्पताल पुग्छन् । नेपालमा बर्षेनि ५०,००० नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिने गरेको अनुमान गरिएको छ । क्यान्सरका लक्षणहरु निम्न अनुसार हुन सक्छन ।
४. अखाद्य रंग, रसायनिक मल, किटनाषक औषधी प्रयोग गरिएका खानेकुराहरू नखाने ।
८. स्तनमा गिर्खा, गाँठागुठी छ/छैन प्रत्येक महिना राम्ररी छामेर हेर्ने र फेला परेमा स्वास्थ्यकर्मीहरुसंग परामर्श
← क्यान्सरका लक्षणहरु के के हुन् ?
बिरालोले राती कसरी आँखा देख्छ त ? →
स्वासको दुर्गन्ध हटाउने १० अचुक उपायहरु
September 1, 2016 साइन्स इन्फोटेक Comments Off on स्वासको दुर्गन्ध हटाउने १० अचुक उपायहरु
December 30, 2016 साइन्स इन्फोटेक 0
August 4, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1